गाडी कर्जाः पैसा कम हुनेलाई सिभिल बैंक, ब्याज कम खोज्नेलाई चार्टर्ड
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, १० भदौ
आजदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा १४औं नाडा अटो शो सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अटो शोको उद्घाटन गरे ।
सवारी साधनको कुम्भ मेलाको उपमा पाएको नाडा अटो शोमा २ पांग्रे र ४ पांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि विभिन्न कम्पनीले विभिन्न योजना ल्याएका छन् ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गाडी मूल्यको आधा रकम ऋण दिन सक्छन् । आधा रकम भने खरिदकर्ताले तत्काल बुझाउनु पर्छ । यो शर्त पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको हकमा मात्रै हो । विद्युतीय सवारी साधनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्छन् ।
नाडा अटो शोमा ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी भएका छन् । गाडी किन्नेहरुलाई ऋण दिन यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न योजना पनि ल्याएका छन् ।
गाडी किन्नको लागि सबैभन्दा सस्तो व्याजको ऋण खोज्दै हुनुहुन्छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ । किनभने चार्टर्डको व्याज सबैभन्दा सस्तो छ ।
चार्टर्डले गाडी किन्नको लागि ९.३९ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने भएको छ । यस्तो व्याजमा बाहेक खरिदकर्ताले ऋण लिनको लागि ०.७५ प्रतिशतसम्म प्रोसेसिङ चार्ज तिर्नुपर्छ ।
तपाइसँग कम पैसा छ भने सिभिल बैंक उपयुक्त हुन सक्छ । किनभने गाडी किन्नको लागि मूल्यको ५० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ । यसो गर्न पैसा पुग्दैन कि भन्ने तपाइलाई समस्या छ भने सिभिल बैंक उपयुक्त विकल्प हो ।
सिभिल बैंकको व्याज भने केही उच्च छ । नाडा अटो शोको अवसर पारेर सिभिलले ११.११ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने योजना ल्याएको छ । यसवाहेक ऋण प्रोसेसिङ चार्ज ०.५ प्रतिशतसम्म लाग्ने सिभिलले जनाएको छ ।
सिभिल बैंकको राम्रो पक्ष भनेको डाउन पेमेन्ट कम हुनेहरुलाई पनि ऋण दिने अर्काे सहायक योजना हो । गाडी किन्नेहरुलाई गाडी कर्जाको साथै २ लाख रुपैयाँसम्मको ओभरड्राफ्ट ऋण दिने योजना सिभिलले ल्याएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले गाडी किन्नको लागि १०.९९ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन्छ । सो बैंकले पनि ऋण प्रोसेसिङ चार्ज ०.७५ प्रतिशत लिने जानकारी दिएको छ ।
यस्तै सानिमा बैंकले १०.४९ व्याजमा गाडी किन्न ऋण दिन्छ । यस्तो व्याजको साथै ऋण प्रोसेसिङ चार्ज ०.७५ प्रतिशत लाग्ने सानिमाले जानकारी दिएको छ । सानिमाले गाडी किन्नको लागि ९ वर्षसम्मको लागि ऋण दिने योजना ल्याएको हो ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गाडी किन्नको लागि ११.६६ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन्छ । यस्तो ऋण ७ वर्षसम्मका लागि हो । व्याज बाहेक ऋण प्रोसेसिङ चार्ज ०.७५ प्रतिशत लाग्ने सांग्रिलाले जानकारी दिएको छ ।
लक्ष्मी बैंकले ११.५० प्रतिशत व्याजमा गाडी खरिद कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । यस्तो कर्जामा ०.७५ प्रतिशत ऋण प्रोसेसिङ चार्ज लाग्छ । लक्ष्मीले गाडी खरिदको लागि ९ वर्षसम्मको लागि ऋण दिने हो ।
एभरेष्ट बैंकले गाडी किन्न १०.५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै ऋण प्रोसेसिङ चार्ज ०.५ प्रतिशत लाग्छ । एभरेष्टले ८ वर्षसम्मको लागि ऋण दिन्छ ।
नबिल बैंकले विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा ९.५९ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको लागि १०.५९ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन्छ । ऋणको किस्ता तिर्ने अवधि नविलले ७ वर्ष राखेको छ । ऋण प्रोसेसिङ चार्ज ०.७५ प्रतिशत रहेको नबिलले जानकारी दिएको छ ।
एनआइसी एसिया बैंकले ९.५ प्रतिशत व्याजमा गाडी खरिद कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै सो व्याजका अतिरिक्त ऋणीले ऋण प्रोसेसिङ चार्ज १.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । एनआइसी एसिया बैंकले भने ८ देखि १५ वर्षसम्ममा ऋणको किस्ता तिरिसक्दा हुने योजना ल्याएको छ ।
ग्लोवल आइएमई बैंकले गाडी खरिदको लागि ९.९९ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने योजना ल्याएको छ । यसको साथै ऋण प्रोसेसिङ चार्ज १ प्रतिशत लाग्नेछ । ग्लोबल आइएमईले ७ वर्षसम्ममा ऋण तिरिसक्दा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंक अफ काठमाडूले सवारी साधन खरिदमा ११.४८ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने योजना ल्याएको छ । आठ वर्षसम्ममा ऋण तिरिसक्दा हुने यो योजनाको ऋण प्रोसेसिङ चार्ज भने १ प्रतिशत तोकिएको छ ।
एभरेष्ट बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने ५ वर्षभित्रमा तिरिसक्ने गरी ऋण लिदा ९.६६ प्रतिशत र ७ वर्षमा तिरिसक्ने गरी ऋण लिदा १०.१२ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । यस्तै ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिदा एभरेष्टले ०.७५ प्रतिशत ऋण प्रोसेसिङ चार्ज र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा ०.५ प्रतिशत प्रोसेसिङ चार्ज लिन्छ ।
हिमालयन बैंकले ९.९५ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने योजना ल्याएको छ । यस्तो व्याज बाहेक ऋण लिने व्यक्तिले ०.५ प्रतिशत ऋण प्रोसेसिङ चार्ज तिर्नुपर्छ । हिमालयनले ८ वर्षसम्मका लागि यस्तो ऋण दिन्छ ।
स्कोडाका गाडीः सस्तो कार साढे ३८ लाख, एसयुभी जीप डेढ करोड
नेपालमा भक्सवागन कारः जर्मनीमा बनेको किन्ने कि मेक्सिको वा भारतमा ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १०, २०७६, १०:५०:००